मलाई त इच्छा मृत्यु ठीक लागेन । - साप्ताहिक
मलाई त इच्छा मृत्यु ठीक लागेन ।
मलाई त इच्छा मृत्यु ठीक लागेन । (इच्छामृत्यु, माघ ९) यसले विभिन्न समस्या ल्याउन सक्छ नि, होइन र ?
- निश्मा लिम्बू, बिर्तामोड, झापा
आफ्नो सरल र अर्थपूर्ण लेखाइ वा अभिव्यक्ति हरेक समय र ठाउँमा प्रभावकारी हुन्छ । (लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भाषाको भूमिका, माघ ९) यो लेख पढेर थप ऊर्जा मिल्यो । नाम निकाल्नु ठूलो कुरा होइन, आफूमा ज्ञान बढाउनु ठूलो कुरा हो ।
माघ ९ को अंकमा रानीको रेकर्डिङ शीर्षकको समाचार पढियो । (रानीको रेकर्डिङ, माघ ९) इन्भायरोमेन्टल गीतका संगीतकार निपेश खड्का नभएर निपेश ढकाल हुन् ।
- लक्ष्मी चापागाईं
खुसी लाग्यो यो लेख पढेर । (मेहनत त्यो हो जो हिलोबाट निस्कन्छ, माघ ९) । कुलतमा लागेका सबै युवाले यस्तै काम गरे नेपालमा पक्कै केही परिवर्तन आउने थियो ।
- बुद्धमाया गुरुङ
दीपक सिलवालको जीवनकथा पढेर दुःख लाग्यो । (तनावले जन्माएको सेवा, माघ ९) म उहाँलाई स्यालुट गर्छु ।
- बाला गुरुङ
मेहनतको फल मीठै हुन्छ नि । (थारुको बच्चाभन्दा गर्व गर्छु, माघ ९)
- खगेन्द्र मगर, रोल्पा
यो तस्विर हेर्दा त अर्कालाई टाउकोमा ढुंगा हान्न आँटेको जस्तो पो देखिँदो रहेछ । (डुम्फु बजाउँदै, सेलो नाँच्दै, माघ ९)
- रीता, हङकङ
साप्ताहिकको गएको अंक राम्रो लाग्यो । अझै नयाँ सामग्रीहरू प्रकाशन गर्नुपर्‍यो ।
- गणेश खनाल
के यो स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो त ? (टाटुमा कामुकता, माघ ९) कुनै नकारात्मक असर गर्दैन ?
- छिरिङ राई
चर्चामा आउन मात्र त्यस्तो गरेको हो कि ? (कपिल र प्रियंकाको झगडा, माघ ९)
- क्रान्ति पोखरेल
कलाकर्मीहरूले हाम्रा धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार-प्रसारमा जोड दिनुपर्‍यो । (गढीमाईमा कलाकर्मी, माघ ९)
- विनोद कार्की, गाईघाट
विश्वकै होचा ब्यक्ति डाँगीको मृत्यु